Vivaldi, iro bhurawuza rekutsvaga vatengi vevatengi | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura, kune kana vashoma vashandisi vanotaura kana kutaura kuti Mozilla inofanira kutarisa mukuvandudza bhurawuza rayo pane kupinda mugakava ripi neripi. Firefox ibhurawuza rakakura, rakapihwa, uye richiri iro chete rakavhurika sosi nzira kune Chromium, asi inogona kuperevedza pane maficha anoenderana nemamwe mabhurawuza. Imwe inozivikanwa kwazvo kune zvese izvo inopa ndeye Vivaldi, bhurawuza yandave ndichishandisa kwechinguva uye, kana ikasandikundikana, ndinofunga kuti Firefox zvanetsa kudzoka kuti ive yangu default browser.
Vivaldi mugwagwa wechidiki. Yayo yekutanga vhezheni yakawanikwa muna2015, asi haina kusvika muna Kubvumbi 2016 iyo payakaburitsa yayo yekutanga yakagadzikana vhezheni. Naizvozvo, isu takatarisana nebhurawuza rine makore mashanu kusvika matanhatu ekuberekwa, zvinoenderana nekuti tinotanga kuverenga riini. Iyo sarudzo kune izvo zvinozivikanwa se "vashandisi vemasimba", ndokuti, yevashandisi vanoda, uye ichi chinhu chaunonzwisisa paunotanga kushandisa zvese zvainazvo kwauri.
2 Kuita nani
3 Vivaldi, sarudzo yakanakisa yevanoda vashandisi ...
4 Vivaldi inoenderana neChannel yekuwedzera uye maapplication
Asi hazvisi zvese zvakanaka. Iyo ine akati wandei zvakaipa zvinhu, senge izvo:
Haisi 100% yakavhurwa sosi. Vivaldi haana Kushinga, uye haazviteedzere kuva. Asi, sezvakatsanangurwa mu yake blogIzvo zvakare haisi "yakavharwa-sosi" mune yakazara. Vivaldi anoshandisa Chromium, uye chikamu icho chinochengetwa chakavhurika. Ipapo ine chikamu chayo pachayo, icho chinonyanya kupa icho chifananidzo uye nemabasa acho, pakati pazvo pane zvinyorwa, mutengi wetsamba kana ad blocker. Iyo zvakare inosanganisira yechitatu-bato kodhi, uye iwe unogona kuona iyo kiredhiti pane peji vivaldi: // zvikwereti. Asi isu tinogona kuisiya mukuti ndeye yakasarudzika.
Shandisa iyo Chromium injini, uye izvi zvinoreva kuti, kana tikasarudza kuchinjira kuVivaldi neFirefox zvanyangarika, panongova nesarudzo mbiri chete (Google neApple engines).
Chinhu chakanyanya kushata chandakaona muVivaldi mumavhiki apfuura ndechekuti pane zvinhu izvo zvichiri kuda kukwenenzverwa. Semuenzaniso, ini ndanga ndichiyedza yako Pop Out uye, ini handizive nei, vhura rakaparadzana hwindo, kwete senge muFirefox pane iyo KDE pani, semuenzaniso, isu tinongoona kuti kune hwindo kunyangwe isu tichiramba tichiona hwindo riri kuyangarara. Izvo zvekuti kune mahwindo maviri haisiriyo magumo enyika, asi ndeyekuti vhidhiyo hwindo dzimwe nguva haigare pamusoro pezvose.
Ndakaonawo sei mamwe maratidziro haashande 100% zvakatsetseka pakombuta ine Intel i3 uye 4GB ye RAM, asi iri rinongova dambudziko rekushongedza. Ndine chivimbo kuti izvi zvese zvichavandudza mune ramangwana, asi ini ndanga ndisingade kutadza kuzvitaura, kunyangwe mifananidzo inogona kuremara.
Vivaldi, sarudzo yakanakisa yevanoda vashandisi ...
… Kana tisinganetseki kushandisa Chromium. Vivaldi ibhurawuza rakakosha kune akawanda, akawanda zvikonzero, senge:
Notes (musoro kubatwa). Muchokwadi, ini ndakanyora ichi chinyorwa mune yeVivaldi chinyorwa mumavhiki mashoma. Pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekunyora manotsi, asi bhurawuza iri rinoenderana ne100% nekodhi yeWorpress, sevhisi inogarwa neLinux Addict Izvo zvinofanirwa kutaura kuti zvinoenderana, chero bedzi isu tichigadzirisa kuwiriranisa uye kushandisa bhurawuza pane anopfuura imwechete kifaa.
Tsamba neKarenda (padhuze neVafone uye RSS). Kusvika ndatanga kushandisa Vivaldi, paLinux neWindows ini ndaishandisa Thunderbird ku gadzirisa tsamba dzangu uye makarenda angu. Pandinoshandisa makomputa angu, nguva zhinji ini bhurawuza rakavhurika, uye kuve nemabasa aya kunoita kuti zvinhu zvive nyore kwandiri. Sekunyora uku, izvi zvinokonzereswa kubva vivaldi: // kuyedza.
Tambanudza skrini (musoro kubatwa). Kunyangwe muFirefox inogona kuitwa nekuisa zvinowedzerwa, ivo havasi kunyange padhuze neiyo Vivaldi sarudzo yemuno. Kune mupepeti seni, senge chero mudzidzi kana mumabasa mazhinji, zvinodikanwa kuve nerugwaro kune rumwe rutivi uye mupepeti kune rimwe. MuFirefox ndaiwanzoshandisa mawindo maviri, asi kudzikisira chiito ndaifanira kuzviita kaviri, uye zvakafanana kuita nzira yekudzoka.
mapuranga. Kuruboshwe (nekutadza) isu tinepaneru pane iyo nhoroondo, kurodha pasi uye tsamba uye khalendari zviripo, asi isu tinogona zvakare kuwedzera masevhisi akadai seTwitter, Teregiramu kana Spotify. Tinogona kuita kuti panhivi iturike: zvinoonekwa kana iwe ukadzvanya uye ukanyangarika kana iwe ukabaya kunze kwayo.
Mutsara wechipiri wematebhu. Ndinofanira kureurura kuti ndechimwe chinhu chandisingashandise zvakanyanya, asi sarudzo yacho yakakosha. Kana isu tavhura akawanda matabhu, mamwe mabhurawuza anowanzoita kupfupisa saizi yawo kusvikira tisingaone chinhu. MuVivaldi tinogona kurongedza maviri pazasi repasi nekungofambisa imwe pamusoro peimwe (unofanirwa kujairira), asi isu tinogona zvakare kuatutira nematunhu.
Kuita somunhu. Vivaldi ine marongero ane sarudzo dzakawanda, dzakawanda zvekuti dzinogona kuvhiringidza, asi zvirinani zvese zvinogadziriswa, senge yekuisa iyo URL bar kana chinzvimbo chemathebhu.
Mitezo. Ichi chinhu chandinoshandisa zvakanyanya muSafari neTrackpad yayo, asi Vivaldi inotibvumidzawo kushandisa zviratidzo. Ivo vanonyanya kugadzikana negonzo, nekuti iko kurudyi kunoshandiswa kumisikidza ivo. Semuenzaniso, tinogona kufambisa mapeji kuenda kumberi kana kumashure nekusvetuka kuruboshwe kana kurudyi takabata bata kurudyi.
Yako "Kutarisisa" (musoro kubatwa). Kana isu tikadzvanya (Fn) F2, hwindo rakafanana neApple's Spotlight kana KDE's KRunner ichaonekwa. Kubva ipapo tinogona kuvhura mirairo, senge kugadzira tabu stacks, chinyorwa kana kuita masvomhu kuverenga.
Basa Tora zororo. Izvi hazvitsanangure, asi zvine basa. Pazasi kuruboshwe, kana neCtrl +. (nguva), tinogona kumbomira zvese, kusanganisira mavhidhiyo nemumhanzi. Inogona kushandiswa kusunungura uye zvakare se Wallpaper.
Vivaldi inoenderana neChannel yekuwedzera uye maapplication
Icho zvakare ipfungwa yakanaka kuti ndizvo inoenderana neChitoro cheChrome, zvinoreva kuti Chrome Browser inoenderana yekuwedzera uye maapplication anogona kuiswa. Ichi hachisi chinhu chinoita kuti chisiyane, chakapesana, asi kuti ichi chinoramba chiri mune mamwe mabhurawuza chinhu chakanaka.
Mukupedzisira, iri imwe sarudzo uye isu tinofanirwa Ongorora kana zvayichapa iri kuzotishandira uye kana zvichizokodzera shanduko, nekuti iyo interface yakasiyana uye ine zvakawanda zvekugadzirisa. Ndiri kunakidzwa nehunhu hwayo, uye zvinonyanya kuitika kuti ichave yangu default browser, kana zvirinani ichave yakachengeteka kana Firefox ikarasikirwa kuchamhembe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Vivaldi, iyo browser yeanoda vashandisi iyo inokoka shanduko nemabasa ayo akakosha